25 / 08 / 2019 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
နေ့: သြဂုတ်လ 25 2019
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Mehmet Ersoy ၏စွပ်စွဲချက်အပေါ် CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက် Gursel Tekin, HaydarpaşaGarı'yl, မေးခွန်းများကိုတောင်းဆိုမှုများဖြေဆိုရန်အဆိုပြုချက်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါ TCDD Haydarpasa ဘူတာ၏ CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက် Gursel Tekin "အိမ်ခြံမြေယိမျးမယိုအချို့မှာဖြိုဖျက်လိမ့်မည် [ပို ... ]
တူရကီ, ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Fahrettin အတွက် TCDD သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦခင်ပွန်းတည်ထောင်သူ Medipol တက္ကသိုလ်ပေးခဲ့သည်။ ဒီရုံ rant ခေါင်းစဉ်လား? ကျွန်တော်မမှုအလွန်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ခြေရာတွေကိုဆောင်သော Spatial ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မှာငါတို့သမ္မတနိုင်ငံတိုက်ခိုက်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ။ သမ္မတနိုင်ငံMüfit Akyos [ပို ... ]
CNC စင်တာ, ဘီးတွင်ခုံ, ပြုပြင်မွမ်းမံ, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်အရည်အချင်းကိုနှင့်အတူတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီဦးတည်; ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ခုံပေါ်တွင်လှည့်က၎င်း၏လက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြမ်းပြင်-တပ်ဆင်ထားဘီးကူးပြောင်းခဲ့သည်။ မီးရထားဘီး UIC စံချိန်စံညွှန်းများအဘို့ပုံစံပြောင်းဘီးခုံ [ပို ... ]
YHT YHT လက်မှတ်ကြိုတင်မှာများနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
YHT YHT လက်မှတ်ကြိုတင်မှာများနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ: မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT) နိုင်ငံသားများစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုများဟာအလွန်လေးနက်သောပြည်နယ်တို့သည် လာ. လုပ်ဆကျဆံ။ YHT ၏စျေးနှုန်းကဘာလဲ ကြောင်းလျှော့စျေးပြီးနောက် '' YHT လား? ဒီမှာလက်မှတ်စျေးနှုန်းများများမှာ ... [ပို ... ]
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်သြဂုတ်လ 25 1922 စတုတ္ထမီးရထားပြည်ထောင်စုဟာသိုးထိန်းဘူတာပြုပြင်စတင်ခဲ့သည်။ အလားတူမီးရထားသတင်းများနှင့်အခြား haberlertarih အကျိုးစီးပွားယနေ့ဖြစ်နိုင်သည်: သြဂုတ်လ 25 1922 စတုတ္ထမီးရထားပြည်ထောင်စုဟာသိုးထိန်းဘူတာပြုပြင်စတင်ခဲ့သည်။ 25 / 08 / 2012 25 သြဂုတ်လ [ပို ... ]